बालुवाटारको दुई अर्ब पर्ने १४ रोपनी जग्गा अझै ढकाल र सुवेदीका नाममा - Kamana Khabar
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार परिसरसँगैको १४ रोपनी सरकारी जग्गा अझै ‘भू-माफिया’ शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता राम सुवेदीको नाममा रहेको पाइएको छ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले रोक्का गरेको जग्गाको सूचीबाट उक्त कुरा पुष्टि हुन्छ। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार उक्त १४ रोपनी जग्गा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ पर्छ।
बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्न सरकारले पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले ढकाल र सुवेदीलाई ‘भू-माफिया’ भनी किटान गरेको छ। उनीहरूले आफ्ना नाममा ल्याएका कैयन रोपनी जग्गा अरूलाई बेचे पनि १४ रोपनी अझै उनीहरूकै नाममा छ।
ढकाल र सुवेदीले अपचलन गरी आफ्ना नाममा ल्याएको सबैभन्दा धेरै जग्गा भाटभटेनी सुपरमार्केट, त्यसका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र उनका परिवारलाई बेचेको छानबिन समितिका एक सदस्यले सेतोपाटीलाई बताए।
ढकाल र गुरुङको लामो मित्रता छ। उनीहरू २०६६/६७ सालमा सँगै कुमारी बैंकका सञ्चालक थिए।
बालुवाटारमा मीनबहादुर र उनको परिवारको नाममा पनि झन्डै १४ रोपनी जग्गा देखिन्छ। मीनबहादुरकै नाममा साढे चार आना छ भने उनकी छोरी कामना गुरूङका नाममा तीन रोपनीभन्दा केही बढी र छोरा कल्याणको नाममा तीन रोपनी छ।
त्यस्तै, मीनबहादुरका आफ्नै भाइ पहलमान गुरूङकी पत्नी सरलाको नाममा चार रोपनी जग्गा देखिन्छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटकै नाममा तीन रोपनी छ।
ढकाल र सुवेदीका श्रीमती उमा ढकाल र माधवी सुवेदीका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ र ३०१५ को आठ आना जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलका नाममा पास भएको देखिन्छ। यो तथ्य बाहिर आएपछि नेकपा महासचिव पौडेल पनि विवादमा मुछिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास परिसर बालुवाटारभित्र आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै ढकाल र सुवेदीले सरकारबाट परिसरबाहिर अर्को जग्गा सट्टापट्टा लिएका छन्। सट्टापट्टाको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउन महासचिव पौडेलले भूमिका खेलेको आरोप उनलाई लागेको छ।
कसरी पुग्यो बालुवाटारको यति धेरै सरकारी जग्गा ढकाल र सुवेदीको हातमा? उनीहरूले कसरी पौडेलको राजनीतिक पहुँच उपयोग गरे?
यसको लामो फेहरिस्त छ।
२०४९ सालसम्मै बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा थियो। २०१८ सालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेरका परिवारको जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो।
ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामध्ये सुवर्णशमशेरको भागमा आउने १४ रोपनी राजद्रोहको अभियोगमा जफत गरी बाँकी सरकारले अधिग्रहण गरेको हो।
२०४७ सालमा राणा परिवारले जफत गरिएका आफ्ना जग्गा फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे। कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो।
स्रोतका अनुसार, ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको सुरूआतमा ढकाल र सुवेदी कतिपय राणा र मोहीका वारेस बनेका छन्। यसरी उनीहरूले बालुवाटारको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याए।
२०६१ सालमा विष्णु पौडेललाई ८ आना जग्गा ढकालकी पत्नी उमा र सुवेदीकी पत्नी माधवीले हस्तान्तरण गरे।
पौडेललाई आठ आना जग्गा दिँदासम्म ‘भू-माफिया’ हरूले बालुवाटारका धेरै जग्गा कब्जा गरिसकेका थिए। तीमध्ये कैयन जग्गा उपभोग गर्न भने पाएका थिएनन्। आफ्नो नाममा आएका जग्गा कसरी उपभोग गर्ने र त्यहाँ रहेका बाँकी जग्गा कसरी कब्जा गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्याउन्न थियो।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री निवास दक्षिणपट्टि अझै सार्वजनिक जग्गा र कुलो थिए। केही मोहीका नाममा रहेका जग्गामा पनि उनीहरूका आँखा थिए। तर, कुनै आधारबिना ती जग्गा आफ्नो हातमा पार्न सक्ने स्थिति थिएन।
एमाले नेतृत्वको सरकार रहेका बेला २०६६/६७ सालमा उनीहरूले मन्त्रिपरिषदबाट पटक-पटक निर्णय गराएर झन्डै थप २७ रोपनी जग्गा हडपे।
यो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने दोस्रो चरणको मन्त्रिपरिषद निर्णय हो।
त्यतिखेर उनीहरूले विष्णु पौडेललाई प्रयोग गरेर माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदमार्फत् पटक-पटक निर्णय गराएका थिए।
यही नक्कली गुठीको जग्गामा २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि मोही खडा गरिएको छ। ती मोहीले ढकाल र सुवेदी अनि उनीहरूका श्रीमतीका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गरेका छन्।